Professional Best Sale ngwaahia Size Memory ụfụfụ Advertising Ohiri Isi emepụta | Rayson
Rayson Spring Mattress Manufacturer eguzobewo ma meziwanye usoro mmesi obi ike nke na-etinye ihe ngosi nke ngwaahịa ahụ na-ebute ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị ahịa chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị. N'ime usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-ahụ maka usoro ọ bụla iji hụ na ngwaahịa dị mma. Ruo ugbu a, Rayson agafeela asambodo sistemụ njikwa njikwa mba ụwa. Ngwa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na asọmpi ahịa.
Can nwere ike inyere m aka ịme nke anyị ma ọ bụ jiri akara m na ngwaahịa ahụ? Anyị nwere ike ime akwa ụra dị ka imewe gị si dị ma ọ bụ nye ọrụ OEM naanị ị chọrọ ka ị nye anyị ihe osise gị ma ọ bụ foto foto. 1. Tinye katoonu n’elu ụlọ dị larịị n’ime ụlọ ihi ụra gị, jiri nwayọ wepụ matarasị ma dina n’elu ihe ndina gị.Jiri nlezianya belata akwa dị na mpempe akwụkwọ na-eme ka ị ghara ibelata plastik dị n'ime ma ọ bụ akwa akwa ahụ, egbula mma. 3.Rụfee ihe ndina ahụ na-ekpuchi agụụ n’elu akwa gị 4. Jiri nlezianya belata akpa rọba tinyere elekere ka akwa ahụ na-amalite ịmalite ngwa ngwa, Wepu akpa rọba. 5.Nye 24 awa ka akwa nkpuchi ọhụrụ gị iji gbasaa n'ụzọ zuru oke. Ee, ịnabata ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị nọ nso ọdụ ụgbọ elu mba Guangzhou Baiyun, ọ na-ewe naanị otu awa n'ụgbọ ala, anyị nwekwara ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.